ထူးခြားအံသြဖွယ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ဧရာမ ခြေရာပုံကြီး – Shwe Thuta
ထူးခြားအံသြဖွယ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ဧရာမ ခြေရာပုံကြီး
Shwe Thuta | November 11, 2020 | Knowledge | No Comments
မြန်မာနိုင် ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ဧရာမ ခြေရာပုံ Foot print ကြီးက ကူမဲ -ရွာငံ-ဝမ်းတွင်း ဖိုခေ နာက်ဆိုင်ပုံ ကြားမှာရှိပြီး ကင်း တားဆည် ၏ မြောက်ဖက် မိုင် ၂၀ လောက်မှာရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ပထဝီမြေ ကြောအ ရ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခြေရာပုံကြီးက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားစ ရာကောင်း ပါတယ်။ ခြေချောင်း တွေ ဦးတည်ချက်က အိန္ဒိယဖ က်ကို ဦးတည်ပြီး ခြေဖနောင့် က တရုတ်ပြည်ဖက်ကို ဦးတည်ထားတဲ့ ပုံပန်းသ ဏ္ဌာန် ဖြစ်နေပါတယ်။
ခြေရာပုံက မြေခွက်မ ဟုတ်ဘဲ ကုန်းမြင့်ပုံဖြစ် နေတာကိုေ တွ့ရပါတယ်။ Goggle map အရ ကြည့်မယ်ဆို 21°14’32.9″N 96°19’41.7″E လောက်မှာရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ Centre လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ခြေရာ အရှည်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ၂ မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိ မယ်ခန့်မှ န်းရပါတယ်။
ဒီမြင်ကွင်က View from above အပေါ် ကကြည့် မှသာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ။ ဆီးရီးယား တို့ ဆော်ဒီအာရေးဗျ တို့မှာ မြင်ရတဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ သဏ္ဌာန် ကျောက်တုံးအစီအမံတွေက လည်းအပေါ် ကကြည့်မှမြင်ရတာပါ။
သို့သော် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ေ ပါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က လူလုပ် စက်ဝိုင်းကျောက်တုံး အစီအမံတွေက သတ္တဝါကြီး တွေကို ဖမ်းဖို့ ထောင်ချောက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ သုသေသီတွေက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံက ခြေရာပုံလောက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူး လို့ထင်ပါတယ်။ Artificial နဲ့ Nature နဲ့ကတော့ကွာပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ အသ ည်းပုံ “ရိခ်ရေကန်” ကတော့ ကမ္ဘာကျော်လူသိ များပါတယ်။ အခုမြင် နေရတဲ့ ခြေရာပုံကလ ည်းနောက်များမှာ ကမ္ဘာကသိလာမှာပါ။
ျမန္မာနိုင္ ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ဧရာမ ေျခရာပုံ Foot print ႀကီးက ကူမဲ -႐ြာငံ-ဝမ္းတြင္း ဖိုခ​ေ နာက္ဆိုင္ပုံ ၾကားမွာရွိၿပီး ကင္း တားဆည္ ၏ ေျမာက္ဖက္ မိုင္ ၂၀ ေလာက္မွာရွိပါတယ္။
ကမာၻ႔ပထဝီ​ေျမ ​ေၾကာအ ရ ျဖစ္​ေပၚ​ေနတဲ့ ​ ေျခရာပုံႀကီးက ေတာ္​ေတာ္​ေလး စိတ္ဝင္စားစ ရာ​​ေကာင္း ပါတယ္။ ေျခ​ေခ်ာင္း ေတြ ဦးတည္ခ်က္က အိႏၵိယဖ က္ကို ဦးတည္ၿပီး ေျခဖ​ေနာင့္ က တ႐ုတ္ျပည္ဖက္ကို ဦးတည္ထားတဲ့ ပုံပန္းသ ဏၭာန္ ျဖစ္​ေနပါတယ္။
ေျခရာပုံက ေျမခြက္မ ဟုတ္ဘဲ ကုန္းျမင့္ပုံျဖစ္ ​ေနတာကို​ေ တြ႕ရပါတယ္။ Goggle map အရ ၾကည့္မယ္ဆို 21°14’32.9″N 96°19’41.7″E ေလာက္မွာရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲ႕ Centre လို႔​ေတာင္​ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ​ ေျခရာ အရွည္အားျဖင့္ အနည္းဆုံး ၂ မိုင္ဝန္းက်င္​ေလာက္ရွိ မယ္ခန့္မွ န္းရပါတယ္။
ဒီျမင္ကြင္က View from above အ​ေပၚ ကၾကည့္ မွသာျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ။ ဆီးရီးယား တို႔ ေဆာ္ဒီအာ​​ေရးဗ် တို႔မွာ ျမင္ရတဲ့ စက္ဝိုင္းပုံ သဏၭာန္ ေက်ာက္တုံးအစီအမံ​ေတြက လည္းအ​ေပၚ ကၾကည့္မွျမင္ရတာပါ။
သို႔​ေသာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္​ေ ပါင္း ၂၀၀၀ ခန့္က လူလုပ္ စက္ဝိုင္း​ေက်ာက္တုံး အစီအမံ​ေတြက သတၱဝါႀကီး ​ေတြကို ဖမ္းဖို႔​ ေထာင္ေခ်ာက္​ေတြသာျဖစ္တယ္လို႔ သု​ေသသီ​ေတြက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔​ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံက ေျခရာပုံ​ေလာက္​ေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ မ​ေကာင္းဘူး လို႔ထင္ပါတယ္။ Artificial နဲ႕ Nature နဲ႕က​ေတာ့ကြာပါတယ္။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ အသ ည္းပုံ “ရိခ္ေရကန္” က​​ေတာ့ ကမာၻ​ေက်ာ္လူသိ မ်ားပါတယ္။ အခုျမင္ ​ေနရတဲ့ ေျခရာပုံကလ ည္း​ေနာက္မ်ားမွာ ကမာၻကသိလာမွာပါ။
မြန်မာ ငွေစက္ကူ များ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ေ၀ တဲ့ စက်ရုံ ကြီး (ဝါဇီ) အကြောင်း
မိမိ အမည်ပေါက်ကား ပြန်ရောင်းမည် ဆိုပါက ဒီအချက်တွေ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ထားပါ
ချစ်တဲ့ သူဆိုတာ ဒီလို လက္ခဏာ (၅) မျိုး ရှိကိုရှိ ပါတယ်….
သင့်အတွက် ကံကောင်းခြင်တွေ ယူဆောင်လာမယ့် နေ့နံ အလိုက်ဆောင်ရန် ကျောက်မျက်ရတနာ
နောက် ထပ် လေးစား ဖွယ်ရာ အပြု အမှုလေး တစ်ခု…GEN Z လေးတွေ ရဲ့
မြန်မာ ပလာဇာရှေ့ မှာ ဆိုင်းဘုတ် ကိုင်ဆောင် ရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ထုတ် ဖော်ခဲ့ကြ မေပန်းချီ နဲ့ ခရစ္စတီးနား….
ငြိမ်းချမ်း စွာဆန္ဒ ဖော်ထုတ်နေ မယ်ဆိုတဲ့ ကိုပေါက်…
နာရေး ကူညီမှု အသင်းမှ ဦးကျော်သူ က ရဲနှင့် စစ်တပ် မိသားစုများကို အကူအညီ မပေးတော့ ဟုဆို….
Mask လုံးဝ မချွတ်ဘဲ သနပ်ခါး Day မှာပါဝင်ပြီး ဆန္ဒပြ ကြမယ့် ပြည်သူ လူထုကို သတိ ပေးစကားလေး ဆိုလာတဲ့ နန်းသူဇာ…